Update Date ဩဂုတ် 17, 2020 .2mins read
လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့ နက္ခတ်စုံညီတဲ့နေ့မှာ မယ်ဇလီဖူးသုပ်ကို စားရင် ဆေးပေါင်းခ၊ ရောဂါတွေပျောက်တယ်လို့ အားလုံးကြားဖူးပြီး ဖြစ်မှာပါ။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အစားအသောက်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိခြင်း, ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရ နိုဝင်ဘာ 26, 2020 . 1 min read
ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ ပန်ကာလေဖွင့်ပြီး အိပ်တာက ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပန်ကာကို ဆက်တိုက်ဖွင့်မယ့်အစား တခြားနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး အေးအောင်နေသင့်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, အိပ်စက်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 24, 2020 .2mins read
အအေးမိတယ်။ တုပ်ကွေးဖြစ်တယ်။ သက်တော့ သက်သာလာပါရဲ့ စားလိုက်ရင် ခံတွင်းမတွေ့ဘူး။ ...
ကူးစက်ရောဂါများ, ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အောက်တိုဘာ 9, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 25, 2021 .3mins read